Home Wararka Khilaafka doorashada Baladweyne iyo saameynta hakinta doorashii la qorsheeyay
Khilaafka doorashada Baladweyne iyo saameynta hakinta doorashii la qorsheeyay
Waxaa cirka isku shareeray khilaafka u dhaxeeya madaxda dowlada goboledka HirShabeelle, waxaan gabi ahaanba albaabada loo soo xiray doorashada halkaa ka socotay. Warqad ka soo baxday Xafiiska Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan ayaa waxaa lagu sheegay in la hakiyay Doorashada ka socota Magaalada Beledwayne sababo Amni owgeed.
Guddoomiyaha ayaa sheegay in ay socdaan falal amni darro oo lagu waxyeelaynayo Doorashada maalinta berri la filayo in ay ka dhacdo Magaalada Beledwayne.. Sidoo kale waxaa sheegay in hakinta ay socon doonto ilaa xaaladda ay sidii Caadiga aheyd ku soo noqoneysa.
Saacadihii u dambeeyay ayaa waxaa soo ifbaxayay khilaaf u dhaxeeya Madaxweynaha iyo Ku-xigeenkiisa, kaasi oo ka dhashay kuraas in la xiro iyo in la furo la isku fahmi waayay.
Hooa ka akhriso
Previous articleFahad oo Jen. Bashiir Goobbe u Diiday inuu Soo Galo Barlamanka 11aa. Akhriso
Next articleAfar sano oo dagaal ah ka dib, DFS oo bishan ruqsad siin doonta bankiga dalka Masar
Wasiir Abdirashiid Janan oo xilkii laga qaaday
Farmaajo oo amar ku bixiyay in la xiro waddooyinka Muqdisho